Heerka Ogolaanshaha Jaamacadda Toronto, Waxbarashada, Shuruudaha iyo Barnaamijyada 2022
January 11, 2019 Okpara Francis
Heerka Ogolaanshaha Jaamacadda Toronto, Waxbarista, Shuruudaha iyo Barnaamijyada
Haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya gelitaanka Jaamacadda Toronto, Kanada, waxaad hubtaa inaad rabto inaad wax ka ogaato heerka aqbalaadda si aad u sii go'aamiso qaddarkaaga gaar ahaan ardayda caalamiga ah. Runta ugu fudud ayaa ah in heerka aqbalaadda Jaamacadda Toronto ay aad u hooseyso, qiyaastii 40% codsadayaasha ayaa ugu dambeyntii loo tixgeliyaa gelitaanka. Heerkani wuxuu kuu sheegayaa in gelitaanka jaamacaddu aysan ahayn socodsiin jilicsan.
Mid ka mid ah wax wanaagsan oo ku saabsan jaamacadda ayaa ah inay heystaan ​​qadar cayiman oo gaar ah oo loogu talagalay kaliya ardayda caalamiga ah. Haddii aysan ahayn dhaqankan, ardayda Kanada oo keliya ayaa laga yaabaa inay qaataan dhammaan boosaska gelitaanka jaamacadda.
Heerka Ogolaanshaha Jaamicadda ee Toronto
Hadaad hubiso sawirka hoose waxaad dareemi doontaa inuu si xawli ah u kordhayo tirada guud ee dadka soo galootiga ah ee dhigata jaamacada Toronto laakiin waxaad ogaan doontaa in garaafka muujinaya tirada dhabta ah ee dadka loo tixgeliyay ogolaanshaha uusan xitaa isbadalin. Kani kaligiis ayaa ka dhigaya heerka aqbalaadda ee jaamacadda sanad kasta.
Jaamicadda toronto garaafka heerka aqbalaadda
Tan macnaheedu waxa weeye, sannad walba way sii adkaanaysaa si loo helo oggolaanshaha jaamacadda laakiin haddii aad shaqo adag tahay, tani maahan laf adag oo la jabiyo.
Sababta iyadoo jaamacadu aysan kordhinin tirada ardayda ay qirato ayaa ah maadaama aysan wali sameynin daandaansi ay kula tacaaleyso arday aad ufara badan.
Iyadoo ay taasi jirto, Jaamacadda Toronto maahan jaamacadda kaliya ee Kanada ka aqbasha ardayda caalamiga ah. Waxaan horay u sameeyay a liiska jaamacadaha waxbarashada hoose ee Kanada ee aqbala ardayda caalamiga ah iyadoo qadarka laga qaadayo ay tahay ujrooyinka waxbarashada ardayda caalamiga ah. Jaamacadahaani waxay sidoo kale aqbalaan ardayda gudaha laakiin waxay leeyihiin qaddar lacag bixin oo kala duwan.
Waxaan qoray maqaallo dhowr ah oo faa'iido u leh ardayda caalamiga ah ee ku saabsan barashada dibedda boggan waxaanan ku qoray dib-u-eegis dhowr jaamacadood oo Kanada ah sidaa darteed waxaan u maleynayaa inaan si weyn u tegayo arrimaha ku saabsan isu-soo-uruurinta xaaladaha gelitaanka iyo nafsad ahaanta lafteeda ugu yaraan hoggaamiye kasta oo Canadian ah jaamacad; walxaha sida heerka aqbalaadda, barnaamijyada, waaweyn, shahaadooyinka, koorsooyinka ay bixiso jaamacad kasta iyo inta kale oo dhan.
Halkan waxaan ku qoray jaamacadda heerka aqbalaadda toronto waxaanan sidoo kale taxay macallinka lagu bixiyo jaamacadda. Waa inaad fiirisaa koorsooyinka hoose.
Koorsooyin / Muuqaalo iyo Darajooyin Jaamacada Toronto, Canada
Dhismaha iyo Adeegyada La Xiriira
Deegaanka, Qowmiyadaha, Dhaqanka, iyo Daraasaadka Jinsiga
Daraasadaha Hindida Mareykanka / Dhaladka Mareykanka
Daraasadaha Aasiya (Bariga)
Daraasadaha Aasiya (Koonfurta)
Daraasadaha Latin America
Daraasado dhow iyo kuwa Bariga Dhexe
Daraasadaha Ruushka, Yurubta Dhexe, Bariga Yurub iyo Eurasia
Sayniska iyo cilmiga Biomedical
Dabeecada Anshaxa Iyo Ethology
Bayoolaji / cilmiga nafleyda
Microbiology-ga Caafimaadka iyo Bakteeriyada
Bayoolaji / xayawaanka xoolaha
Ganacsiga, Maamulka, Suuqgeynta, iyo Adeegyada Taakulaynta La Xiriira
Maamulka Ganacsiga iyo Maareynta
Xiriirka Shaqada Iyo Warshadaha
Isgaarsiinta, Saxaafadda Iyo Barnaamijyada La Xiriira
Isgaarsiinta Dijital ah Iyo Warbaahinta / warbaahinta badan
Isgaarsiinta Mass / warbaahinta
Xiriirka Dadweynaha / Maareynta sawirka
Sayniska Kombiyuutarka Iyo Macluumaadka Iyo Adeegyada Taageerada
Isgaarsiinta Nidaamyada Kombiyuutarka iyo Isgaarsiinta
Faransiis Luuqad Labaad / Shisheeye (waxbarid)
Waxbarashada Macallinka Luqadda Faransiiska
Waxbarashada Macallimiinta Caafimaadka
Waxbarashada Macallinka Sayniska
Aerospace, Hawada iyo Astronautical / space Engineering
Bioengineering Iyo Injineeriyada Biomedical
Injineerka Software Computer-ka
Injineerinka korantada iyo korantada
Injineeriyada cilmiga cilmiga dhulka
Wax soosaarka injineernimada
Macdanta Iyo Macdanta Injineerinka
Gaadiidka Iyo Wadada Wadada Injineerinka
Luqadda Ingiriisiga Iyo Suugaanta / Waraaqaha
Qoyska Iyo Sayniska Sayniska / Cilmiga Aadanaha
Cuntooyinka, nafaqada, iyo Fayoqabka
Luuqadaha Dibadda, Suugaanta, iyo Luuqadaha
Afafkii Hore Ee Bariga Iyo Baybalka
Classics Iyo Luqadaha Qadiimiga ah
Luqadaha Casriga ah
Xirfadaha Caafimaadka iyo Cilmiga Caafimaadka ee La Xiriira
Kalkaalisada Umulisada / Umulisada kalkaalisada ah
Teknolojiyada shucaaca / sayniska
Kalkaaliye Caafimaad Diiwaangashan / Kalkaaliso diiwaangashan
Taariikhda Iyo Falsafada Sayniska Iyo Teknolojiyada
Farshaxanka iyo sayniska Liberal, Daraasadaha Guud iyo Bani'aadamka
Xisaabta Iyo Tirakoobka
Xisaabtiga la isticmaalay
Daraasado badan / maadooyin kala duwan ah
Qadiimiga ah, Bani-aadamka qadiimiga ah iyo Daraasadaha Bariga dhow iyo Qadiimiga ah
Daraasaadka Nabadda Iyo Xallinta Khilaafaadka
Kheyraadka Dabiiciga Ah Iyo Ilaalinta
Maareynta Kheyraadka Kaymaha / Kaymaha
Sayniska Qoryaha Iyo Alaabada Qoryaha / saxarka iyo Teknolojiyada Waraaqaha
Jardiinooyinka, Madadaalada, Madadaalada Iyo Barashada Jimicsiga
Caafimaadka iyo Waxbarashada Jirka / jir dhiska
Hydrology Iyo Kheyraadka Biyaha Science
Maamulka Dadweynaha Iyo Xirfadaha Adeegga Bulshada
Adeegyada Amniga iyo Difaaca
Caddaaladda Danbiyada / Sayniska booliska
Sayniska Cilmiga iyo Teknolojiyada
Xiriirka Caalamiga Iyo Arimaha
Cilmiga Siyaasadda Iyo Dowladnimada
Muuqaal Iyo Farshaxanimo
Taariikhda Muusiga, Suugaanta, iyo Aragtida
Waqtiga boostadan, oo leh heerka aqbalaadda jaamacadda ee hadda, jaamacaddu waxay leedahay wadar ahaan ardayda diiwaangashan 70,728 waxayna ku qaadataa C $ 4,883 kharashka waxbarashada C $ 255 oo ah khidmadda dalabka.
Waxaad awoodi kartaa ku soo biir daraasaddeena dibedda kooxda telegram haddii aad su'aalo ka qabtid deeqaha waxbarasho ee jaamacaddan ama aad u baahan tahay hagitaan dheeraad ah.
heerka aqbalidajaamacada torontoheerka aqbalaadda jaamacadda ee torontojaamacada toronto gelitaankakoorsooyinka jaamacadda torontojaamacada toronto majorsjaamacadaha barnaamijyada torontojaamacada ardayda torontolacagta waxbarashada jaamacadda ee toronto
Previous Post:Jaamacada Durham University Business School Dean ee deeqda waxbarasho ee Ardayda Caalamiga ah ee UK, 2019
Post Next:Barnaamijka Aqoonyahannada Caalamiga ah ee Cargill (CGSP) ee loogu talagalay Shahaadooyinka Caalamiga ah ee Maraykanka, 2019